पश्चिमी देशहरूलाई युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अपील
काठमाडौँ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सीमामा रुसी सेनाको उपस्थितिबीच युद्धबाट नडराउन पश्चिमी देशहरूलाई अपिल गरेका छन् ।
उनले पत्रकारहरूलाई भने कि 'कुनै पनि समय आक्रमण हुन सक्छ' जस्ता चेतावनीहरूले युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर गरिरहेको छ ।
यसअघि बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले अर्को महिना युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले यसलाई बलियो सम्भावना भनेका छन् ।
अर्कोतर्फ रुसले पनि निरन्तर यही कुरा गरिरहेको छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको बारम्बार बताउँदै आएको छ ।
शुक्रबार रुसका विदेशमन्त्रीले मस्कोले युद्ध नचाहेको बताए ।
हाल युक्रेनको रुससँगको सीमामा करिब एक लाख सैनिक तैनाथ छन् । जसका लागि अमेरिका र पश्चिमा देशले लगातार युद्धको चेतावनी दिइरहेका छन् ।
यहि समयमा, युक्रेनका राष्ट्रपतिले सेनाको यो तैनाथीलाई पछिल्लो पटक भन्दा ठूलो खतराको रूपमा नदेखेको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले सम्मानित देशका नेताबाट भोलि युद्धको सम्भावना देखिएलगत्तै चेतावनी दिइएको बताए । यसले आतंकको वातावरण सिर्जना गर्छ, यसले हाम्रो देशलाई कत्तिको असर गर्छ ? सम्बोधनमा उनले देशभित्रको यस्तो त्रास र अस्थिरताको अवस्था देशका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको बताए ।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एमिली हर्नले राष्ट्रपतिले फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएकी छन् । उनले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् र हामीले धेरै महिनादेखि चेतावनी दिइरहेको बताइन् ।
प्रवक्ताका अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपतिसँगको वार्तामा राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले रुसलाई निर्णायक जवाफ दिने बताएका छन् ।
यहि समयमा, रुसले आक्रमणको डरलाई अस्वीकार गरेको छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशहरुसामु धेरै माग राखेका छन् । उनले ती देशहरूलाई युक्रेनलाई कहिले पनि नाटोको सदस्य बन्न नदिन र नेटो गठबन्धनले पूर्वी युरोपमा आफ्ना सबै सैन्य गतिविधि त्याग्न आग्रह गरेका छन् ।
पुटिनले गरे लुहान्स्क कब्जा गरेको घोषणा, जेलेन्स्की भन्छन्- आफ्नो भूमि फिर्ता लिन्छौं
काठमाडौँ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा भएको आक्रमणको १३१औँ दिन सोमबार प्रत्यक्ष प्रसारणमा रुसले पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क प्रान्त कब्जा गरेको घोषणा गरेका छन् । टिभीमा घोषणा गर्नु रुसी राष्ट्रपतिको
युक्रेनको अर्को शहर रुसको कब्जामा, जेलेन्स्कीले सक्लान् त पुटिनलाई रोक्न ?
काठमाडौँ । युक्रेनको सेनाले आफ्नो पूर्वी सहर लिसिचान्स्क अब रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि गरेको छ । 'युक्रेनी रक्षा बलहरू लिसिचान्स्कको लागि भयंकर युद्ध पछि आफ्नो स्थानबाट पछि हट्न बाध्य
रुस-युक्रेन युद्धको अन्तर्यमा पश्चिमा शक्ति र रुस लडे- प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुस–युक्रेन युद्धको अन्तर्यमा पश्चिमा शक्ति र रुस लडिरहेका बताएका छन् । काठमाडौंमा आइतबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले राजनीति प्रतिवेदन पेस
लिसिचान्स्क पनि रुसले कब्जा गर्दै
काठमाडौं । लुहान्स्क क्षेत्रको एक मात्र बाँकी शहर लिसिचान्स्क पनि रुसी सेनाले नियन्त्रण गर्न सक्ने राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकारले स्वीकारेका छन् । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ओलेक्सी अरेस्टोभिचले रूसी सेनाहरूले अन्ततः सिभरस्की दोनेत्स्क नदी
अखिल क्रान्तिकारीको १ सय ९७ सदस्सीय समानान्तर समिति